Maroc: Morocco inokumbira Algeria kuzarura miganhu yakafanana - TELES RELAY
HOME » pasi rose »Maroc: Morocco inodana kuAlgeria kuzarura miganhu yakafanana
Maroc: Morocco inodana kuAlgeria kuzarura miganhu yakafanana
Gurukota reMorocco, Saâdeddine El Othmani, akadzokorora zvakare kune zviremera zveAgeria zvekuvhura kwemiganhu yakafanana, pamusangano nevanyori venhau vaMoroccan uye vaparidzi, vakaitwa musi weChitatu 15 munaMay.
Saaddeddine El Othmani, uyo anoti anonyanya kutarisira nezveramangwana rehukama pakati pezve nyika mbiri mushure mekuparadzwa kwehurumende yaAbdelaziz Bouteflika, anotenda kuti "post-Bouteflika Algeria ichava mukufarira kweMorocco. Uye chisarudzo chechisikigo chevatsva vakuru veAgeria ndechokuzarura kwemiganhu ".
Mutungamiri wehurumende yeMoroccan, iyo iri kutaura kwekutanga kuAlgeria kubvira pakatanga kushamwaridzana kwakakurumbira munaFebruary 22, inotarisira kuti ukama huri pakati penyika mbiri huchavandudzwa mushure mekuwa kwehurumende yekare. Anoshevedza vatungamiri vatsva veAgeria kuti vasvitse miganhu yakafanana "mushure mokudzoka kunonoka uye kuiswa kwemahofisi ehurumende itsva yeAgeria".
Mutungamiri weMoroccan anotenda kuti hurumende itsva muAlgeria "haichazopfuura hurumende yaAbdelaziz Bouteflika", ichiti: "Tine chivimbo chemangwana rehukama hwedu nevavakidzani vedu veAgeria uye tinotarisira kuwana mhinduro pamwe chete".
Nokuda kukurukurirana kwakananga pakati peAlgeria neMorocco
Izvi zvitsva zvitsva, zvakabudiswa nemukuru mukuru wehurumende yeMoroccan uye achikoka Algeria kuti azarure miganhu yayo, inouya mwedzi mishomanana mushure mekudanwa kwaVaMorgan Foreign Minister Nasser Bourita, vakataurirwa kuvakuru veAgeria "Kutaura hurukuro" pamusoro penharo yemiganhu yakafanana.
Mutungamiri weMorganic Foreign Foreign and International Cooperation akati, iyo 23 January, kuti "kudanwa kwaMambo kunobva mukuda kwechokwadi, ruoko rwake rucharamba rwakasimba uye vanhu vaviri vane chido chechokwadi". Nasser Bourita akanga avimbisa kuti "Algeria ne Maroc hazvidi kuti vamiririri vagozogadzirisa matambudziko avo ose. "
Kune chikamu chayo, theAlgérie vakokwa kuMorocco kuti vatsigire chido chayo chekusimbisa hukama hwekubatana nekubata, muna December 2018, Munyori Mukuru weArab Maghreb Union (UMA) kudana kwaari kuti aite musangano weWBU Council of Foreign Ministers munguva pfupi yakanyanya.
Verenga zvakare: Marokoro inobata Algeria zvakare
Rondedzera kukanganisa munyaya yacho
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.observalgerie.com/actualite-algerie/maroc-demande-ouverture-frontieres-communes-algerie/
Gwaro revashandi vepuratifomu "rinoisa France mukutungamirira kwevanhu munzanga muEurope"
Morocco: I1 Formu ichakurumidza kudzokera kuMorocco - Afrik.com